खुुद नाफा गरेको वित्तीय विवरण सार्वजनिकपछि लगातार दुई दिन सर्किट लेभलमा बढ्यो अपर तामाकोशीको शेयरमूल्य
मंसिर १, काठमाडौं । पहिलो पटक खुद नाफा गरेको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएसँगै अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको शेयरमूल्य दुई दिन लगातार सर्किट लेभलमा बढेको छ ।
गत कात्तिक ३० गते कम्पनीले रू. ८६ करोड १९ हजार खुद नाफा गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । वित्तीय विवरण सार्वजनिक भएको दिन मंगलवार र बुधवार कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको हो ।
सोमवार अन्तिम मूल्य रू. ५८३ रहेको कम्पनीको मंगलवार र बुधवार निरन्तर सर्किट लेभलमा मूल्य बढेपछि कम्पनीको अन्तिम शेयरमूल्य बुधवार रू. ७०५ दशमलव ४० पुगेको हो ।
मंगलवार कम्पनीको रू. ३ करोड ६१ लाख ७८ हजार बराबरको ५६ हजार ४१८ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो भने बुधवार रू. ६ करोड ७० लाख २५ हजार बराबरको ९५ हजार ४९ कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो ।
गत वर्ष पहिलो त्रैमाससम्म रू. १ करोड ७८ लाख १ हजार खुद नोक्सानीमा रहेको कम्पनीले यस वर्ष नोक्सानी सुधार गर्दै खुद नाफा गर्न सफल भएको हो । यस वर्ष कम्पनीले विद्युत् विक्रीबाट रू.१ अर्ब ७२ करोड ७७ लाख ५१ हजार विद्युत् विक्रीबाट आम्दानी गरेसँगै नाफा कमाएको हो।
गत वर्ष यस अवधिसम्म कम्पनीले विद्युत विक्री गरेको थिएन । २०७८ साल असारमा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपनि कम्पनीले साउन र भदौ महीनामा विद्युत् परिक्षण उत्पादन प्रक्रियामा रहेको थियो । भदौ ४ गतेदेखि चार ओटा युनिटबाट उत्पादित विद्युत् विक्री प्रारम्भ भई भदौ २५ गतेदेखि सम्पूर्ण ६ ओटै युनिटबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रशारणा जोडिएको थियो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब ५९ करोड रहेको थियो । जगेडा कोष रकम भने रू. २० करोड ८ लाख ९१ हजार ऋणात्मक रहेको छ । कम्पनीको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३२ दशमलव ४८ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ९८ दशमलव १ छ ।
अपर तामाकोशी ८६ करोडभन्दा बढी नाफामा